China-egbu maramara ịsa panel anọ ọrụ n'ịnyịnya emepụta na suppliers | Chengpai
Polish ịsa ahụ panel Anọ mgbidi mgbidi n'ịnyịnya
Nọmba nlereanya CP-LJ06
Mechaa Nhicha / nchacha
Panelsa panel akụkụ
Akụkụ mmiri ịsa ahụ Hanheld 230x60mm
Ogologo mmiri ịsa ahụ 1500mm
Patternskpụrụ usoro efegharị n’elu mmiri ozuzo, ụgbọelu akụkụ, ọkpọkọ mmiri, ịwụ aka
Ogwe ịsa ahụ 304 igwe anaghị agba nchara
Igwekota 304 igwe anaghị agba nchara
Ịsa sooks 304 igwe anaghị agba nchara
Hanheld ịsa ahụ na njide Plastic
Net arọ (kgs) 8
Gross arọ (kgs) 10
Isi aka ịsa ahụ EE
Wersa isi sooks EE
Wersa ahụ n'isi njide EE
Stainlesslọ elu ịsa ahụ a na-anaghị agba nchara nwere nnukwu isi ịsa ahụ nke edobere n’elu. Isi mmiri ịsa ahụ nwere ụdị akụkụ anọ mara mma nke nwere akụkụ akụkụ anọ ọhụụ, na-enye ọmarịcha mmiri na-ekpuchi ahụ gị niile iji nye gị ahụmịhe ịsa ahụ n'ezie.
Pgba mmiri a na-awụ mmiri na-ezo elu mmiri, jut n'akụkụ, mmiri na-asa mmiri na pọmpụ.
Nnukwu ugboelu uzo abuo buru ibu maka ogwu ogwu. Na ngụkọta 48 iberibe jet nozzles, nye a magburu onwe spa ahụmahụ.
Na-efefe nnukwu mmiri ozuzo, nnukwu ịgba. Jiri mpempe iri ise kesaa ihu ihu ihu igwe, jiri nnukwu nrụgide na ụfụfụ mmiri. Mgbanwe silicone nozzles na-akwụsị wayo ọnụ ọgụgụ n'ịnọgide nke na-egbochi oghere ndị ahụ igbochi na ịwụpụ, enweghị ọnya na ịpụpụ. Ọrụ nsụda mmiri na-enyekwa gị nhọrọ dị iche iche maka ịsa ahụ.
Igwe mmiri ịsa ahụ a bụ 100% siri ike siri ike 304 igwe anaghị agba nchara, na-adịgide adịgide na nchara nchara. Egwuregwu a na-emecha chrome elu na-eme ka isi mmiri ịsa ahụ mara mma na egwuregwu dị egwu na ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla.
Ogwe valvụ ịsa ahụ na-abịa na ntụgharị ntụgharị. Abụọ akara ahụ ka nke 304 igwe anaghị agba nchara. Inside ịsa valves bụ ofu elu mma seramiiki katrij na-enye ikike na-atụgharị ọ bụla nke outlets na ma ọ bụ gbanyụọ mfe mgbe ọ dị mkpa.
Ọ na-ewe naanị nkeji ole na ole iji wụnye mgbidi a. Elu ejirila ma tinye ya kpamkpam, na-ejikọ aka na mmiri mmiri oyi gị dị ọkụ.
A na-etinye ọkpọkọ mmiri na ogwe mmiri ịsa ahụ a. Ọ dị mma ka ị saa ụkwụ gị.
Lọ ọrụ Chengpai agbaala mbọ ịmepụta ngwaahịa ịsa ahụ karịa afọ iri. Ugbu a, e mechara na ọtụtụ ngwaahịa ahịrị, ngwaahịa dị mma karị, ọnụahịa dị mma karị.
Nke gara aga: N'uko n'ịnyịnya anọ ọrụ alụlụ square ịsa ahụ isi
Osote: Atọ ọrụ ịsa isi
Ogwe ịsa ahụ Brass
Adobe Ikuku Panels
Kọwaa Ome mkpuchi
Ogwe ịsa ahụ Fresca
Oghere Johnson Shower
Massage ịsa Panel
Panelsa Panel Panel
Oghere Ndabere Upc
Foldable anaghị agba nchara towel ogbe
Recessed atọ ọrụ Ikanam ịsa ahụ isi
Ultra mkpa atọ ọrụ ịsa isi
Large size akụkụ anọ ịsa ahụ ikanam ìhè na ...